Ake uqale nge yokuthi umsebenzi teletype ezweni lanamuhla cishe akazange asebenzise, kanti uma isetshenziswa kuyaqabukela kuphela. Ukuxhumana nomphakathi kanye Inthanethi beye bafaka ngokuphelele, kodwa ifektri ukubeka Smartphones eziningi izinga lokwehla kwamandla emali. Kuyini - a teletype, nokuthi ukuyisebenzisa? Futhi kungakhathaliseki ukuthi kubalulekile ngaso sonke?
Kuyini imodi ye-TTY ku "Android" noma i-iOS?
Lesi sici ubizwa nangokuthi-text-mode yocingo, futhi wasebenzisa sona ukuze ukuthumela imiyalezo nge ucingo. Yiqiniso, teletype yesimanje akuhlangene ngensimbi yomculo omkhulu, okuyinto kwaba ngaphambilini kule yunithi. Ukuze le modi wasebenza iPhone, udinga ukufaka i-adaptha ekhethekile angathengwa e-Isitolo se-Apple. Ukuze abanikazi Android-smartphone, zikhona ezinye izinhlelo zokusebenza okunye. Nakuba ngokuvamile nje ayidingeki.
Fushanisa kule modi ibizwa ngokuthi i-TTY (TeleTypewriter). Lolu khetho, okuyinto Smartphones yesimanje lwenteke kubantu abane ababuthakathaka inkulumo noma ukuzwa amakhono. Manje ucishe kucace ukuthi iyini - a teletype. Kodwa esadinga ukuphendulwa.
Umgomo we operation ezinzima elula: zokuxhumana senzeka phakathi interlocutors ezimbili. Umuntu oyedwa nge ababuthakathaka amakhono izwi yikhono ukuphrinta umbhalo ocingweni. Lo mbhalo ungumuntu ngakolunye uhlangothi uthola ngefomethi umsindo. Kungase kube okuphambene: umuntu uthi, nomngane wakhe ngakolunye uhlangothi ubona umbhalo.
Okungukuthi-TTY iguqula inkulumo ukuze umbhalo, noHezekeli. Kubantu abanalesi ababuthakathaka umsindo futhi inkulumo amakhono ukhetho ezifana iyasiza.
Kungakhathaliseki wonke amafoni asekela teletype?
onobuhle eziningi amafoni smart lwanamuhla kusekela kule modi, kodwa hhayi wonke. Ukuze zingatholakali kuzo iPhone, udinga ukuqala ukuthenga adaptha ekhethekile. Khona-ke kukho uqobo kuyodingeka isebenze kuzilungiselelo.
Uma udinga kule modi, udinga ukuya izilungiselelo bese ubheka le ndlela lapho ekhetha ifoni. Uma ungibuze ngalokhu yokuthengisa consultant cishe ikuphendule kahle futhi nakanjani, ngoba bambalwa kakhulu abantu bayawazi lesi sici. Kodwa uqaphele ukuthi Smartphones iningi lwanamuhla kusekela mode.
Indlela amandla uphinde ukhubaze?
Banikezwe iqiniso lokuthi umbuso asihlobene, futhi esimweni saso isebenze ibusa amandla webhethri, kuyoba usizo ukwazi indlela ukuvala TTY ku-iPhone. ngokuzenzakalelayo kuvaliwe. Kodwa ngo izilungiselelo ku "Ucingo" kuyinto imodi ye-TTY. Lapho indlela vala teletype, bese uyivule. Kodwa cishe, le ndlela ngeke isebenze kuphela nama-adaptha ikhebula ekhethekile. Futhi ngokuvamile, umbuso kufanele kusekelwe ngumnikezi wesevisi yakho.
Kuyini teletype kusuka kumlando?
Le divayisi lakhiwe kudala, futhi lalisetshenziselwa phakathi nenkathi yamaSoviet. Lena umshini ekhethekile electromechanical ukuphrinta bese uthumela imiyalezo (umbhalo). Uma umphumela umfanekiso yesimanje, kuba into efana SMS.
Ukusungulwa kwe-amadivayisi nokuthuthukiswa fanele onjiniyela ezifana Charlz Kram, Royal House, Emil Bodo, Devid Hyuz et al. Eyandulela we okuthiwa Teletype iTheyiphu tape, kodwa ithuthukiswe ngonyaka 1870. Yayikwazi ukuphrinta umbhalo wadluliselwa wire.
Kamuva, kunethiwekhi yomhlaba isisunguliwe okwakubizwa ngokuthi inethiwekhi Telex futhi esetshenziselwa zenzeka ekhulwini lamashumi amabili emkhakheni wezokuxhumana ibhizinisi. Amanye amazwe namanje ukuyisebenzisela izibalo, ukusakazwa, navigation ngisho wamabutho. Kuyaphawuleka ukuthi ngaphambi kokuqala 70s last sibonga kwekhulu ukuba teletype kwakunokwenzeka ukushintshashintsha imiyalezo phakathi US President kanye nobuholi be-USSR.
Kule nkathi ekuqhubekeleni phambili kwezindaba ubuchwepheshe bama-computer teletypes zazisetshenziswa njengezibonakaliso interactive ikhompyutha ezikhumulweni. Ekuqaleni bebengebona zesikrini, kanye nabasebenzisi Ungafaka imininingwane kuphela ngemva isignali ekhethekile. Lena yindlela womyalelo esibonakalayo nombhalo ezikhumulweni.
ukuthandwa teletype banyukubala kusukela 90s, kodwa ngisho namuhla kukhona umsakazo nayizimfundamakhwela abasebenzisa imishini. Kodwa namuhla le akudingekile, ngoba amafeksi, amakhompyutha, ngesivinini amanethiwekhi kanye Inthanethi waxosha lezi amadivaysi asebekhulile.
Ngakho ngokuzayo lapho kuphakama ingxabano ngalokho kuba - a teletype, khumbula ukuthi le divayisi sithola indaba enkulu, futhi leli gama lisho nje kuphela imodi yokuxhumana efonini ephathekayo.
By endleleni, ngo-TTY Smartphones cishe akuhlangene ne teletype zakudala. It uhlala kuphela igama, kodwa eqinisweni umsebenzi kuhluke ngokuphelele. Wona washintsha signal processing kanye ne-transmission indlela.
Ngo Smartphones teletype it is kuyaqabukela esetshenziswa - kungaba kokuzitika, noma ngempela lula ukuxhumana phakathi abantu abayizithulu. Ukuhlobana lobu buchwepheshe namuhla okungabazisayo, Ngakho-ke, akukho inqubekelaphambili ukuthuthukiswa nokwenziwa ngcono umbuso ngeke. Abanye amafoni omusha ukusebenza manje. Banikezwe ukuthuthukiswa ngokushesha 3G 4G amanethiwekhi kanye amakhono Smartphones yesimanje ukuba adlulisele siguqulwe umbhalo / izwi usebenzisa izinhlelo ezikhethekile. Kuzoba esheshayo nelula. Singathini mayelana nezingosi zokuxhumana nabantu, sibonga ngalo ngisho nabantu kwenkulumo evamile / amakhono kokuzwa uthanda ukukhuluma in text format! Nokho, mayelana uhlelo like Skype, futhi, kumele kukhunjulwe. Futhi ukuvula kungenzeka yokuxhumana ebanzi, kuhlanganise abantu abayizithulu (lolimi lwezandla, lip Ukufundwa). Futhi zonke ezahlukene ongakhetha akumangalisi ukuthi teletype Umbe ishabalale.
Manje uyazi ukuthi iyini - a teletype. Cishe, akadingi nawe, ngakho uyivale. Imodi Kuvulwa sidlile ophethe ibhethri ye-smartphone luyize.
Imithetho eyisisekelo ye-logic